China Collagen Peptide ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
Ama-peptide e-Collagen iqukethe izinhlobo ezingaphezu kwezingu-18 zama-amino acid, okunomsoco, futhi okulula ukukumunca, kusetshenziswe iziphuzo, amakhekhe, uswidi neminye imikhiqizo, ekuqiniseni kokudla nase-emulsification, futhi kukhulisa ukugayeka kalula nokumuncwa kokuqukethwe kwamaprotheni ukudla, unomphumela we-dietotherapy, ukhuthaza ukuphulukiswa kolwelwesi lwamafinyila emzimbeni, uthuthukise isigaba segazi, futhi kunomthelela omkhulu wokwelapha egazini lonke ukunciphisa ukopha.
I-collagen peptide, ikakhulukazi ekhishwe enhlanzini, ezinkomeni nasezingulubeni, inesisindo esincane samangqamuzana kune-collagen ngokwemvelo etholakala emzimbeni womuntu nowesilwane, futhi ingamunzwa ngqo ngumzimba womuntu.
Isobho lethu le-stewed pig trotter nsuku zonke, isikhumba senyama, izinyawo zezinkukhu njalonjalo liqukethe i-collagen ecebile, kepha hhayi nge-peptide encane yamangqamuzana esingayimunca ngqo.
Ngaphezu kwalokho, ucwaningo luye lwaveza nokuthi izinga lokuhlanganiswa kwe-collagen ngama-peptide wokumunca liphakeme kunalelo lama-amino acid wamahhala.
Ama-peptide e-Collagen, ekhishwe kwi-collagen yemvelo, isetshenziswa kabanzi njengempahla eluhlaza ekwenziweni kokudla, iziphuzo nezithako zokudla ukuze kuzuze amathambo nempilo ehlangene nobuhle besikhumba.
Ngesikhathi esifanayo, ama-collagen peptides futhi kungasheshisa ukutakula ukuqeqeshwa kwabathandi bezemidlalo noma abadlali bezemidlalo.
Ucwaningo lwesayensi lukhombisile lokho ama-collagen peptides, lapho ithathwa njengezithasiselo zokudla, ngasikhathi sinye ingasheshisa ukuvuselelwa kwamaseli nokukhula emzimbeni womuntu, futhi kuvele umqondo webhayoloji ngemuva kwalezi zinzuzo zezempilo.
Ama-peptide e-Collagen onke aqukethe ama-peptide amafushane, aqukethe ama-amino acid aphakathi kuka-2 no-20.
Ngemuva kokungenisa, ezinye ama-collagen peptides uthola i-enzymolysis ebalulekile emzimbeni. Ama-enzyme wokugaya agaya la ma-peptide amafushane abe amafomu amancane njengama-dipeptides nama-tripeptides, ukuze amuncwe kalula umzimba futhi alinganiswe egazini.
Langaphambilini I-Collagen yesiphuzo esiqinile
Olandelayo: Inhlanzi Collagen